” မတူကွဲပြား “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” မတူကွဲပြား “	11
” မတူကွဲပြား “
Posted by ခင်ခ on Jan 14, 2015 in Creative Writing, Poetry | 11 comments
အလင်းဆက် says: ဒီကဗျာထဲ.. ကျနော် သိတဲ့ လူနှစ်ယောက်ပါတယ်။
အတည်မမန့်တတ်တော့လို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: ကဗျာထဲက အာဇာနည်ယောက်ျားကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် သူ့အသက်ကိုပေးဆပ်ပြီး ကျဆုံးသွားပြီနော်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယနေ့ထက်တိုင်မမေ့နိုင်လေးစားနေစဲဗျ။
aye.kk says: မတူကွဲပြား၊လက်လှဲမလား။
manawphyulay says: အင်း လေးလေးခ ပြောမှပဲ အာဂက ယောက်ျားလေးမှန်းသိရတော့တယ်… :P
ကဲ နွယ်ပင်ရေ… အာဂက ယောက်ျားလေးတဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .အမျိုးကောင်းစား ရုံ လုပ်သူတွေကိုတော့ “အာဂယောက်ကျား” လို့မခေါ်ပါနဲ့ကိုခင်ခရယ်
.အဲ့လူတွေက သူခိုးကြီးတွေပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: အာဂလူလို့ပြောရင်.. ရှေးရှေး.. အထကောက်လူတွေက.. မကြိုက်..
အူကလာတာ.. ?? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဝက်အူချောင်း ထဲ က အသား က အူကလာတာလေ။
လူအတော်များများ အလွန်ကြိုက်ပေါ့။ lol:-))))
Ma Ma says: ဟိုရက်က ဖွဘုတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နှစ်၁၀၀ပြည့်ပွဲအတွက် မုံရွာမှာ အလှူခံနေတာကို တောင်းစားတဲ့ အမယ်အိုတစ်ယောက်က ၂၀၀ လှူသွားတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိသေးတော့တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
Before says: အဲဒါဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားတာ ကိုပြတာလေ
အောင်ဆန်း လို လူ ကတော့ တစ်သက် တစ်ယောက် ဘဲ ရနိုင်ခဲ့လား မသိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ အပြည့် မသုံးနိုင်ခဲ့ ဘူး။
နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ် ကျော် နီးပါး ဒီ အတိုင်း ဘဲ ထိုင်ကြည့် နေရတာ။ ဒါထက်
ကိုခ ကို မြင်ဘူးသွားပြီ။ မှန်းတာထက် ပိုပြီး ငယ် နေပါရော့လား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
Before says: အရီးရေ ဟုတ်ပ ၂၅ နှစ်လွန်ပေမယ့် ဖြစ်ချင်တာတော့ ဝေးကွာစဲနော်